Izindaba - Isingeniso Esiyisisekelo se-Cooling Towers
Umbhoshongo wokupholisa uyisishintshisi sokushisa, ngaphakathi kwawo ukushisa kukhishwa emanzini ngokuxhumana phakathi kwamanzi nomoya. Imibhoshongo yokupholisa isebenzisa ukuhwamuka kwamanzi ukwenqaba ukushisa okuvela ezinkambisweni ezinjengokupholisa amanzi ajikelezayo asetshenziswa ezindaweni zokuhluza uwoyela, izitshalo zamakhemikhali, izitshalo zamandla, izigayo zensimbi nezitshalo zokucubungula ukudla.
Umbhoshongo wokupholisa amanzi wasezimbonini ukhipha imfucuza emfucumfucwini naphezu kokupholisa komfudlana wamanzi kuya ezingeni lokushisa eliphansi. ITowers esebenzisa le nqubo ibizwa ngokuthi imibhoshongo yokupholisa evaporative. Ukushabalalisa ukushisa kungenziwa kusetshenziswa umoya noma ukuhwamuka kwamanzi. Ukusakazwa komoya wemvelo noma ukusakazwa komoya okuphoqelelwe kusetshenziselwa ukugcina ukusebenza kahle okudingekayo kokusebenza kombhoshongo kanye nemishini esetshenziswayo kule nqubo.
Le nqubo ibizwa nge- “evaporative” ngoba ivumela ingxenye encane yamanzi epholisiwe ukuba ihwamuke iye emfuleni womoya ohambayo, inikeze ukupholisa okukhulu kuwo wonke lowo mfula wamanzi. Ukushisa okuvela emfudlaneni wamanzi okudluliselwe emfuleni womoya kukhuphula izinga lokushisa lomoya nomswakama olinganiselwe kuwo ube ngu-100%, futhi lo moya ukhishelwa emoyeni.
Izinsiza zokulahla ukushisa ezikhipha umhwamuko - njengezinhlelo zokupholisa ezimbonini - zivamise ukusetshenziselwa ukuhlinzeka ngamazinga okushisa aphansi kakhulu kunokutholakala ngamadivayisi wokuphika ukushisa “opholile emoyeni” noma “omile”, njenge-radiator emotweni, ngaleyo ndlela kufinyelelwe ebiza kakhulu futhi ukusebenza kahle kwamandla kwezinhlelo ezidinga ukupholisa.
Imibhoshongo yokupholisa amanzi yezimboni iyahluka ngosayizi kusuka kumayunithi amancane ophahla-phezulu kuye ezakhiweni ezinkulu kakhulu ze-hyperboloid (hyperbolic) ezingaba amamitha angama-200 ubude namamitha ayi-100 ububanzi, noma izakhiwo ezingunxande ezingaba ngaphezu kwamamitha ayi-15 ubude namamitha angama-40 ubude. Imibhoshongo emincane (iphakheji noma i-modular) imvamisa yakhiwa ngefektri, kuyilapho emikhulu ngokwengeziwe yakhiwa esizeni ngezinto ezahlukahlukene.